Ayyaana bara haarawa irrati mucaa umrii 19 qawwee dhokaasuudhan dubartii tokko kan ajjeesefi nama sa | KWIT
Oromo News 01.05.21
Mia Kritis umrii 18 kan tatee kan due yoo tau ijoolen biraa 3 madaahani jiru.
Poolisin akka jedhetti morales addabbii barbaachisa kan argatu yoo tau. Kritis baratuu senior kan North High School ture.
Siouxland qophiidha qilleensa biraa kaa wintaraa akka dhuffuu hime, hojattooni haala qilleensa biyyaa akka jedhaniti barri 2020 magaala Sioux City dhaaf qilleensa gogaa ture jedhani.
Waggaakan suttes precipitation inche 20 qofa ture. Kan ta’uu qabus inche 28 ture. Kanaafu, waggaati inche 7.66 gadi 2020 keessati yoo tau recordiidhanis gogiinsa 19th irra jira.
Har’a karoora haarawa guddaa baasani jiran riverfront Sioux City haaromsiisuf. Deparmantin Iowa kan culture affair Chris Larson parka haaromsiisuf $400,000 kennani. Biirrin guddaadha kan keenames akka State guututi communitie9 keessati doolara $1.25 milliyena kan kennameedha akka program Iowa Great Place.
Projektiin kunis kan June keessatti birrii $12 milliyene ol kan itti baye keessa isa tokko. Paarki haarwa kan kan bakkaa Argosy Casino kan itti fayadamaa ture dabalatee. Parkin kunis kan uf keessa dabalatu kan akka overlook, mana sadihii, bakka basketball fi fixuudhaf waggaa lama kan itti fudhatu ta’a.
By Fatiya Adam • Jan 4, 2021
Oromo News 01/04/2021
Deparmantiin mana fayyaa Iowa akka gabaasanitti guyyaa wiyxataa Woodbury County keessati namni 3 dabalataan sababa Covid-19 du’uu himan, akka dhukubni jalqabe nama 171 du’ee.
Torbaan tokko keessati, Iowa nama due 247 edaate jirti fi namni haarawa qabame ammo 10,000 ta’uu gabaasan.
Woodbury County keessati, guyyaa haar’a namni haarawa qabame 17 yoo ta’u, qoranno bulti 14 keessati namni qabame parsantii dhan 15.5% gaheera. Torbaan lamaan darbe irraa parsanti lama olgudattee jira.
By Fatiya Adam • Dec 29, 2020
Oromo News 12/29/2020
Deparmantiin mana fayyaa Iowa sababa Covid-19 namni 67 guyyaa har’aa kan du’e yoo ta’u seati 24 darban kana keessati namni haaraawa qabame ammo 1,500 dha.
Manneen nursing kan Iowa keessati talaalin corona virus kennamu jalqabe jira, kunis warra isaani akka dhufanii laalanafis karaa kan banamu ta’a kan jedhamu abdi qabu, talalin kun wal gahuudhaf turban ol akka fudhatus himan.